Wararka - Bandhigga Goddess salon FAYGOUNION salon habaynta
Bandhiggii Goddess-ka ayaa yimid, FAYGOUNION-na waxay u diyaarisay salon qurxin ubax loogu talo galay ilaahyada. Magaca ubaxyada, ilaahyada Shiinaha waxay u wada tagi doonaan arrimaha ubaxa. Waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiinba maalinta farxadda ilaahadda!
Roses, platycodons, carnations, uis, macallinka ayaa qof walba mid mid u soo bandhigay noocyada ubaxyada ee maanta loo isticmaalo ubax diyaarinta, wuxuuna si dulqaad leh kuu baray sida loo maareeyo ubaxyada kala duwan qaabab kala duwan Ka dib markii ubax si rasmi ah loo bilaabay, macallinka wuxuu ka codsaday qof walba inuu soo bandhigo dulmar hadba sida uu doorbido, ka dibna u adeegso ubax sida ubaxa ugu weyn, ka dibna si xor ah u geli ubaxyada kale agagaarka dhererka, isticmaalna burooyinkooda aan la shubin sida kordhin si loo wada muujiyo. Waxay u egtahay sidii fiditaanka banaanka.
In kasta oo noocyada ubaxku asal ahaan isku mid ka yihiin qof kasta, hoosta gacmaha xirfad leh ee ilaahad kasta, ubax kasta oo dheriga ka duwan ayaa ka duwan.
Ka dib ubax diyaarinta saloon ka dib, Flying Pigeon Fanciers ayaa sidoo kale keeg u diyaariyey ilaahyada!
Iyo, maanta sidoo kale waa dhalashada macalinka ubaxa! Intaas oo kaliya maahan, bishaan sidoo kale waa bil dhalashada labada carwo ee yar yar, Xiao Chen iyo Xiao Yang oo ka tirsan Flying Pigeon Fanciers. Aniga oo ka faa’iideysaneyna fursaddan, qof walba wuxuu u soo diray heesta salaanta dhalashada ~
Haweenku waa sida ubaxa oo kale, ubaxuna sida hiyo ayuu u ubaxaa.
Waxaan rajeynayaa in ilaahyada Flying Pigeon Fanciers ay noqon karaan qoraxdooda! Indhahaagu iftiin ha ahaadaan! Haweenka adduunka oo dhami ha ku farxaan oo ha noqdeen boqorado iyaga u gaar ah weligood.
Khadadka Tuuboyinka Hal Darbi Jiif ah, Hdpe Double Wall jiingado tuuboyinka Line Production, Single Wall jiingado tuuboyinka Mashiinka, Double Wall jiingado Mashiinka Mashiinka, Khadka Hdpe jiingado tuuboyinka Extrusion, Pe / pp / PCV jiingado tuuboyinka Production Line,